Robocalls - Ma tabi doonno iyaga! | Martech Zone
Robocalls - Ma tabi doonno iyaga!
Wednesday, September 9, 2009 Khamiista, Febraayo 9, 2017 Adam Yar
Dhammaanteen waan helnaa, oo ku dhowaad guud ahaan waan necbahay iyaga, wicitaanka dhibta leh ee dhiirrigelinaya wax soo saarka ama dhacdooyinka qaar ee ciyaara rikoodh ama, xitaa ka sii darran, wuxuu kula hadlayaa isagoo ku hadlaya cod farsamo ah. Hagaag, FTC waxay soosaartay sharciyo iyo qawaaniin cusub oo kusaabsan meelaynta wicitaanadan.
Jon Leibowitz, Guddoomiyaha FTC, wuxuu lahaa ereyo aad u qurux badan oo ku saabsan mowduuca.
Macaamiisha Mareykanku waxay si cad u cadeeyeen in waxyaabo yar ay ka careysiiyaan in ka badan balaayiin balamo ganacsi oo ay helaan sanad walba.
Laga bilaabo Sebtembar 1, duqeyntan garoonno horay loo sii qorsheeyay, codsiyo bilaa macno ah, iyo suuq xumo waxay noqon doontaa sharci darro. Haddii macaamiisha ay u maleynayaan inay dhibaateynayaan robocallers, waxay u baahan yihiin inay nala soo socodsiiyaan, waana ka daba tagi doonnaa iyaga.
Tani waxay umuuqataa inay tahay xeerarkii ugu adkaa ee ilaa maanta laxiriira noocan suuqgeynta, laakiin waxaa jira xoogaa digniin ah oo u ogolaanaya kooxaha qaar inay sii wadaan adeegsiga tikniyoolajiyadan. Intooda badani waxay ku wareegsan yihiin farriimaha warfaafinta iyo farriimaha xayeysiinta ah.
Fikradda guud ayaa ah haddii aad soo waceyso inaad dhahdo in ciyaarta Johnny ee kubada cagta la joojiyay taasi waa ok, laakiin haddii aad soo waceyso inaad ii sheegto dalabkan cusub ee cajiibka ah ee aad haysatid waxaa laga yaabaa inaad dhibaato kala kulanto $ 16k halkii wicitaan haddii aadan aan haysto ogolaansho qoraal ah oo deg deg ah. Taasi waxay ku dari kartaa ganaax adag oo degdeg ah haddii shirkaddaadu isticmaasho noocan tikniyoolajiyadda warfaafinta.
Eeg ogeysiiska FTC bixinta iyo muuqaalka guud, ama fiiri sharciga ugu dambeeya pdf.
Tags: wicitaanada otomaatiga ahftcwicitaanada telefoonkarobocallstelemarketing
Foomamka Isku-dhafan ee Salesforce oo ay ku jiraan Formstack